သုံးရောင်ခြယ် ကျောက်ကျော – Thet Nandar
အိမ်က .. ကလေးများအကြိုက် … ရောင်စုံ ကျောက်ကျောတုံးလေးများ ….
သားသားက အစိမ်းရောင် ကျောက်ကျောတုံးကို ပိုကြိုက်ပါတယ် …
အနီ … အဖြူ .. အစိမ်း
Agar – Agar ( တယ်လီဖုန်း ) တံဆိပ် ကျောက်ကျောထုပ်မှာ .. ကျောက်ကျော အမှုန့်3tbs ( ထမင်းစားဇွန်း – ၃ ဇွန်း ပါတယ် )
ကျောက်ကျော ( ထမင်းစားဇွန်း – ၁ ဇွန်း )
သကြား – 1/2 cup & 1 tbs
ဆိုးဆေး – တစက်
အရင်ဆုံး … အစိမ်းရောင် ကျောက်ကျော တလွှာ လုပ်ဖို့ …
ကျောက်ကျော အမှုန့် ( ထမင်းစားဇွန်း – ၁ ဇွန်း ) ကို ရေအေး ၂ ခွက် နှင့် ကျောက်ကျောမှုန့်များ ပျော်နေအောင် ဖျော်ပီး ….
သကြား – ခွက် တ၀က် နှင့် ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း ( ၄.၆ အောင်စ ) ထည့်မွှေ …
မီးဖိုပေါ် တင်ပီး ကျောက်ကျောမှုန့်များ နှင့် သကြား ပျော်ဝင်နေအောင် အဆက်မပြတ် မွှေပေးပီး …
အမှုန့်များ ပျော်ဝင်သွားပီး ဆိုမှ အစိမ်းရောင် ( ဆိုးဆေး ) တစက် ထည့်မွှေပေးပါ …
ပီးရင် ကျောက်ကျောဗန်းထဲကို လောင်းထည့် …
အိမ်မှာ ရေခဲသေတာ အပေါ်ထပ် မအားလို့ …
အောက်ထပ်ထဲ ထည့် …
နောက်တလွှာ အတွက် ….
အုန်းနို့ ( သံဗူး ) တဗူး ဖောက်ထည့် … အုန်းနို့များ ပျော်ဝင်နေအောင် အဆက်မပြတ် မွှေပေးလိုက်တယ် …
ပီးတာနဲ့ ရေခဲသေတာထဲက အစိမ်းရောင် ကျောက်ကျော အလွှာပေါ်မှာ ထပ်တင်လိုက်တာပါပဲ …
( ကျောက်ကျောတုံးက ကျောက်ကျောမှုန့်များ နှင့် သကြား .. အုန်းနို့ ပျော်ဝင်နေမှ ပိုစားကောင်းပါတယ် … ဒါကြောင့် ကျောက်ကျော ကြိုတဲ့ အခါ … အိမ်မှာ အဆက်မပြတ် မွှေပီး ကျောက်ကျော ကျိုတယ် .. အဲလိုမျိုး ချက်တဲ့ ကျောက်ကျောတုံးကို ပိုကြိုက်လို့ )
အနီရောင် ( ဆိုးဆေးမှုန့် ) ကို အနည်းငယ် ထည့်မွှေ …
အုန်းနို့ ကျောက်ကျော ပေါ်မှာ လောင်းထည့်လိုက်ပီး …
ရေခဲသေတာထဲ ထည့် …
နာရီဝက် ( ၄၅ မိနစ် ) လောက် အအေးခံလိုက်ရင် ကျောက်ကျောတုံးလေးများက လှီးလို့ ကောင်းတဲ့ အနေအထားကို ရပါပီ …
ဒါကတော့ အိမ်က ကလေးများ အကြိုက် … ဂျယ်လီလိုလို ကျောက်ကျောတုံးလေးများ
ကျောက်ကျောမှုန့် ( Agar – Agar ) တထုပ် ကို
ရေ အေး – တလီတာခွဲ (6cups ) နှင့် ပျော်ဝင်နေအောင် အရင်ဖျော်ပီးမှ ..
သကြား – ၁၄ အောင်စ ( 1 3/4 cups ) ထည့် .. မီးဖိုပေါ် တင် …. အဆက်မပြတ် မွှေပီး …
Coconut Cream – ၁ ဗူး ဖောက်ထည့် … ပျော်နေအောင်မွှေပေးပီးမှ ကျောက်ကျောဗန်းထဲကို လောင်းထည့် … ၄၅ မိနစ်လောက် ထားပီး ချက်ထားတဲ့ ကျောက်ကျော အုန်းနို့ ကို အကြိုက်ဆုံးပါ … ( ၂ ဗူး လောက် ဖောက်ထည့် ပိုတောင် ကြိုက်သေးတယ် ) ကိုယ့် ကြိုက်တာ ကိုယ် ပြောတာ …
ကိုယ့်ဆီကိုလေ … ကွန်မန့် ပေးတာ proxy နဲ့ပေးတာလား … ဘယ်လိုပေးတာလည်း မသိဘူး .. ကွန်မန့်က ဒီဘက်မှာ မတက်လာပဲ … Spam ထဲ ရောက်နေပါတယ် … ကိုယ့်လည်း နားတော့ မလည်ဘူး … သူ့ရဲ့ ကွန်မန့်ကို ကိုယ့် approve လုပ်ရခက်တယ် … spam ထဲ ရောက်နေတဲ့ ကွန်မန့်မို့လို့ approve လုပ်လိုက်ရင် ဘလော့ error တက်သွားမှာ စိုးလို့ပါ ….
တခါ ကြုံဖူးတာက မြန်မာကပဲ Proxy နံပါတ်နဲ့ ကွန်မန့်ပေးတာ … အဲလိုမျိုးပဲ .. blogspot က သူ့ဘာသာသူ spam ထဲ ထည့်ပလိုက်တယ် … ဒီဘက်မှာ .. ကိုယ်က approve မလုပ်ပေးဖြစ်ဘူး ..
အခု အဲဒီ တယောက် ကွန်မန့်ကို ကော်ပီ ကူးလာခဲ့တယ် .. သူမေးထားတာ ကိုယ်ဖြေချင်တာလည်း ပါ လို့ပါ …
မဖြေချင်ရင်တော့ ဟဲ … ဟဲ .. delete လုပ်လိုက်မှာပါ …
အဲဒီ တယောက်လည်း တခြား ဘလော့တွေမှာ ကွန့်မန့်ပေးတာ အဆင်ပြေလား မသိဘူးနော် …. ကိုယ့်ဘလော့ကျမှ spam ဖြစ်သွားတာလား မသိဘူး .. ( ဟီး ဟီး )
အမရေ အထပ်နဲ.ကျောက်ကျောလေးတွေလုပ်ရင် ပထမ တထပ် ခဲပြီးမှ နောက်တထပ်ကိုလောင်းထည်.တာလားဟင်။ မခဲသေးဘဲနဲ.တထပ်ပြီးတထပ် လောင်းထည်.သွားရင် ကျောက်ကျော အရည်ရောင်စုံတွေ ရောကုန်မှာပေါ.နော်။ တထပ်ခဲပြီးမှ နောက်တထပ်ခင်းတော.လဲ အထပ်တွေက မကပ်နေဘူးလားလို.။ ဓားနဲ.ဖြစ်ဖြစ်၊ cutter နဲ.ဖြစ်ဖြစ် လှီးလိုက်ရင် အထပ်လေးတွေကွာကုန်တတ်လို.လေ။ အမဘယ်လိုလုပ်တာလဲမသိဘူးနော်။ ကျေးဇူးပါ။ on သုံးရောင်ခြယ် ကျောက်ကျော
Thet : ကျောက်ကျော က … ပထမ တလွှာ .. ကျောက်ကျော အစိမ်းရောင်ကို လောင်းထည့် …
( လက်ညိုးလေးနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ )
ကျောက်ကျော တင်းရုံလေး ( ဥပမာ … လက်ညိုးက ကျောက်ကျော အရည်ဆိုရင် အရည်ထဲကို ၀င်သွားလိမ့်မယ် … တင်းရုံလေးဆို ထိလိုက်တာနဲ့ လက်ညိုး လေးက ပျော့စိ စိလေးကို ထိလိုက်သလိုမျိုး … ခဲနေပီ ဆိုရင်တော့ ကျောက်ကျောတုံးကို ထိလိုက်သလိုမျိုး )
ကျောက်ကျော တင်းရုံလေးမှာပဲ နောက်ထပ် အုန်းနို့ကျောက်ကျော အဖြူရောင်ကို လောင်းထည့် … ( အဲဒီ အလွှာက အုန်းနို့ရည် နှင့် ကျောက်ကျော ပေါင်းထားတာမို့ ကျောက်ကျော တင်းတာ နည်းနည်း ကြာပါတယ်)
တတိယအလွှာ .. အနီရောင် ကိုလည်း အုန်းနို့ကျောက်ကျော တင်းလာပီး ဆိုတာနဲ့ လောင်းထည့်လိုက်ပါ …
အမ အာမခံတယ် …
ကျောက်ကျော လိုမျိုး ခဲမနေခင်မှာ လောင်းထည့်ပါ …
စားလို့ရတဲ့ အနေအထား ကျောက်ကျော ခဲမှ လောင်းထည့်ရင်တော့ သူ့ပြောသလို အထပ်လေးတွေ မထပ်ပဲ ကွာကုန်ပါလိမ့်မယ် …
ကျောက်ကျောကို လက်ညိုးလေးနဲ့ ဖိကြည့်လိုက်တာနဲ့ တင်းနေပီ ဆိုရင် ရဲ ရဲသာ နောက်တလွှာ လောင်းထည့်ပါ …
လုံးဝ Mix မဖြစ်သွားဘူး ဆိုတာ အာမခံပါတယ် ..
ကျောက်ကျော အားလုံးကို အုန်းနို့လေးတွေ ရောချင်တယ် … အုန်းနို့မပါတဲ့ ဂျယ်လီ လိုလို အလွှာ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း …
ကျောက်ကျောမှုန့် – တထုပ်
ရေ – တလီတာခွဲ (6cups )
သကြား – ၁၄ အောင်စ
အုန်းနို့ – ၁ ဗူး
ရေအေး ( တလီတာခွဲ ) မှာ ကျောက်ကျောအမှုန့် တထုပ်ကို ကျေညက်နေအောင် မွှေပီးမှ သကြား ၁၄ အောင်စကို ထည့်မွှေ ..
သကြား ကျေမှ အုန်းနို့ တဗူးကို ထည့်မွှေ … ( ကျေနေအောင် အဆက်မပြတ် မွှေပါ )
ပီးရင် မီးဖိုမီးပိတ် ..
အုန်းနို့ သံဗူး တဗူးကို ခွက် အရေအတွက် နဲ့ ဆိုရင် ၂ ခွက်သာသာ လောက် ရှိပါတယ် …
** ကျောက်ကျော ကျိုရင်းနဲ့ ( ရေပမာဏ လျော့တာကိုလည်း ထည့်တွက်ရင်း )
ဒါကြောင့် .. ကျောက်ကျော အိုးထဲက2cups ကျော်ကျော် လောက် ပန်းကန်လုံးထဲကို ခပ်ယူပီး အစိမ်းရောင်ဆိုးဆေး .. ၁ စက် နှင့် မွှေပါ ….
ကျောက်ကျောဗန်းထဲကို လောင်းထည့် .. ကျောက်ကျောဗန်း (အောက်ခြေ အပြန့် ) ၁၀ လက်မ ပတ်လည်ဆို အတော်ပါပဲ …
ကျောက်ကျော အဖြူရောင်အတွက် … အိုးထဲက ကျောက်ကျောများ နည်းနည်းပြစ်သွားရင် .. မီးဖိုမီးဖြင့် ထပ် အပူပေး … မွှေပေးလိုက်ရင် အုန်းနို့ကျောက်ကျော အရည်များ ပြန်ကျဲ သွားပါလိမ့်မယ် …
( လောင်းထည့်တဲ့ အခါ ကျောက်ကျော အရည်ကျဲကျဲနော် …
ကျန်နေတဲ့ ကျိုပီးသား ကျောက်ကျောတွေက တအောင့် အကြာမှာ နည်းနည်း ပြန်ပြစ်နိုင်တာမို့ အပူ ထပ်ပေးပါ .. ကျဲသွားအောင် .. )
အစိမ်းရောင် ကျောက်ကျောတုံးလို ခဲနေတာမျိုး မဟုတ်ပဲ လက်ညိုးနဲ့ စမ်းကြည့်လို့ တင်းနေပီ ဆို ရင် ..
အဖြူရောင် တလွှာ ကို လောင်းထည့် …
အဖြူရောင် ကျောက်ကျော တင်းလာပီ ဆိုရင် ….
ခုနုက အတိုင်းပဲ .. အနီရောင် ဆိုးဆေး နည်းနည်းထည့်မွှေပီး ….
ကျောက်ကျောများ တင်းလာပီ ဆိုတာနဲ့ အနီရောင်ကို လောင်းထည့်ပါ …
ကိုယ့် အာမခံနိုင်တာက .. ကျောက်ကျောများ လက်ညိုးနှင့် စမ်းလို့ တင်း တင်းလေး ဆိုရင် အုန်းနို့ ကျောက်ကျော ပူ ကို လောင်းသာ ထည့်လိုက်ပါ .. Mix မဖြစ်သွားပါဘူး …
ကျောက်ကျော ခဲမှ လောင်းထည့်ရင်တော့ တလွှာ စီ သပ်သပ်ဖြစ်နေမှာပါ …
အုန်းနို့ နှင့် ရောထားတဲ့ ကျောက်ကျောဆိုရင် ကျောက်ကျော အလွှာ တင်းတာ နည်းနည်းကြာပါတယ် …
အုန်းနို့မပါ ကျောက်ကျော ချည်း သပ်သပ်ဆိုရင်တော့ ခဏလေးနဲ့ တင်းပါတယ် ….
ကိုယ့် အုန်းနို့ ( coconut cream ) ၂ ဗူး သုံးတဲ့ အခေါက် ကျောက်ကျောမှာ သကြား ပိုထည့်ပါတယ် .. အုန်းနို့ ၁ ဗူးဆိုရင်တော့ အိမ်မှာ သကြား အဲဒီလောက်ပဲ ထည့်ပါတယ် ….
ဗီယက်နမ် ဆိုင်က အုန်းသီးခြစ်တဲ့ ခုံ
အနီးကပ် ရိုက်ထားတယ် .. ရန်ကုန်မှာက သံ နဲ့ လုပ်တာ … အုန်းခြစ်
မုန့်ပေါင်းခွက် ( အဖုံး )
အားလူးပူတီ .. လုပ်တဲ့ အခါ သုံးဖို့ ဒလိမ့်တုံး
♪♫ လူကဲခတ် မတတ်တဲ့ ငတုံးလို့ ငါ့ကိုယ်ငါ အပြစ်တင်မိတယ် ♪♫
အခုဆိုရင် အဖူးလေးတွေတောင် ထပ် ထွက်လာပီ …
အဲဒီ အပင်ကို ကြည့်ပီး …
ကြည့်ရင်း .. ကြည့်ရင်းနဲ့
ပြောင်းလဲမှု့က မြန်ဆန်လွန်းတယ် ..
အချိန်က ကိုယ့်ကို မစောင့်ဘူးနော်
တေးဆို – IMP
Intro: [ G D Em Bm C G Am D ] 2
G         D           Em               Bm
ငါ့အတွေးများလည်း ခြာခြာလည် အသဲကွဲဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့အဆုံးမှာ
C      G         Am         D
လူကဲခတ် မတတ်တဲ့ ငတုံးလို့ငါ့ကိုယ်ငါ အပြစ်တင်မိတယ်
ပြောင်းလည်းမှုက မြန်ဆန်တော့ မင်းမုန်းသွားလည်း ချစ်လို့ ငါမပြီးသေးပါ
တကယ်လို့အသဲကို နောက်တစ်ခါ ကစားရင် နဲနဲလေးတော့ အချက်ပြခဲ့ဦး
G            D           Em              Bm
ဟိုတစ်ခါ စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ မင်းရဲ့မျက်နှာ ငါပြန်ချော့လိုက်တော့ ပြုံးသွားတဲ့ အခါ
C           G             Am           D
လေပြည်တွေလို ကြည်နူးသွား နူးညံ့မှုတွေ ပေးတဲ့ (အပြည့်နဲ့ ) မျက်နှာ
ဒီတစ်ခါ အမုန်းများနဲ့မင်းရဲ့မျက်နှာ နာကျင်စွာ တစိမ်းတစ်ယောက်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါ
ပြန်ဆုံရင် တကယ် မခေါ်ဘူးလား ရက်စက်မှုတွေ အပြည့်နဲ့မျက်နှာ
Music : D# Bb D# D G D Em Bm C G Am D D D D G D Em Bm C G Am D
မာယာ မင်းသမီးလေး အလိုကျတိုင်း အလိုက်တသိနဲ့လိုက်ကနေခဲ့မိတယ်
ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ အဆုံးမှာ အသဲကွဲ သမားကတော့ ငါပဲပေါ့
Original Key C – ဖြစ်ပါသည် ။
Credit : http://www.ainmat.com/index.php?/archives/42-IMP.html
credit : http://youtu.be/6C2OOXMShJQ
April 15, 2012 Thet Nandar
4 thoughts on “သုံးရောင်ခြယ် ကျောက်ကျော”
အိမ်က သမီးတော့ မကျွေးရဲဘူး..လျှောဆိုဝင်သွားပြီး နင်မှာစိုးလို့…
အသစ်တက်ရင် လာဖတ်၊ တခါတလေ ဟင်းချက်နည်းတွေ လာကြည့်ပြီး ခြေရာ မချန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး…
တစ်ခါက ကောမန့်ပေးရတာဘာလို့လဲ မသိ.. မတက်ပဲ ခက်နေတာနဲ့ ရေး၇တာ ပျင်းသွားတာ.. ဒီကောမန့်တော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိ..
မြန်မာနှစ်သစ်မှာ သက်နန္ဒာမိသားစု ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ..။
KhinU Khine says:
Hi Thet Nandar Family,
I tried your banana-sooji cake on the weekend and it turned out delicious. thanks for sharing the recipes.
@ NSA … သမီးလေး မှုံနံသာ ကို ဇွန်းနဲ့ ဖဲ့ဖဲ့ပီး ကျွေးလို့ ရမှာပါ ….
comment တွေကို Always moderation လုပ်ထားလို့ ချက်ချင်းမတက်တာပါ … blog owner .. approve ဖြစ်မှ ကွန့်မန့်က တက်လာတာပါ ….
မြန်မာနှစ်သစ်မှာ Ma Sandar Lin တို့ မိသားစု အားလုံး ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ ….
@ Yuya Mone …
/▌*˛˚ღ •˚ Thanks, Happy Myanmar New Year to Yuya Mon !˚ ✰* ★
@ Khin U Khine,